အိမ်ထောင်ရေး ဖောက်ပြန်ခဲ့သော်လည်း ရာထူးမှ ဆင်းမပေးနိုင်ဟု သြစတြေးလျ ဒုတိယ ဝန်ကြီးချုပ်ြေ?? - Yangon Media Group
အိမ်ထောင်ရေး ဖောက်ပြန်ခဲ့သော်လည်း ရာထူးမှ ဆင်းမပေးနိုင်ဟု သြစတြေးလျ ဒုတိယ ဝန်ကြီးချုပ်ြေ??
ဆစ်ဒနီ၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၆
အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်ကြောင်း ပေါ် ပေါက်ခဲ့သည့် သြစတြေးလျ ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ် ဂျွိုက်စ်က မိမိရာထူးမှ ဆင်းပေးမည် မဟုတ်ကြောင်း၊ မိမိ၏လုပ်ရပ်ကို ဝန်ကြီးချုပ် တန်ဘူးလ်က ဝေဖန်ခြင်းမှာလည်း လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရာမရှိကြောင်း ဖေဖော်ဝါရီ ၁၆ ရက် တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။ ဒုဝန်ကြီးချုပ်ဂျွိုက်စ်မှာ သားသမီးလေးဦး၏ဖခင်ဖြစ်သည်။ သို့ သော် ရုံးဝန်ထမ်းအတွင်းရေးမှူးမလေးနှင့် အိမ် ထောင်ရေးဖောက်ပြန်ခဲ့သည်။
အတွင်းရေးမှူးမလေးမှာ ယခုအခါ ကိုယ်ဝန်လွယ်ထားရပြီဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဝန်ကြီးချုပ်တန် ဘူးလ်က ဂျွိုက်စ်၏လုပ်ရပ်မှာ အံ့အားသင့်တုန်လှုပ်ဖွယ်မှားယွင်း ကြောင်း၊ ၎င်းအနေဖြင့် ၎င်း၏ ရာထူးကို ပြန်လည်သုံးသပ်သင့် ကြောင်း ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅ ရက်က ဝေဖန်ပြောကြားခဲ့သည်။ ဝန်ကြီးများနှင့် ရုံးဝန်ထမ်းများ မချစ်ကြိုက်ကြရန်လည်း တား မြစ်ချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ သို့သော် ဒုဝန်ကြီးချုပ် ဂျွိုက်စ်က ”မနေ့ကသတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲမှာ ဝန်ကြီးချုပ်ပြောခဲ့တာတွေဟာ ရေနစ်သူဝါးကူထိုးသလိုဖြစ်နေတယ်”ဟု ပြောသည်။ ”သူပြောသွားတာတွေက မဆီ လျော်မသင့်တော်ဘူးလို့ ကျွန် တော်ယုံကြည်တယ်။ သူမလို အပ်တာတွေကို ပြောသွားတာ”ဟု ဂျိုက်စ်က တုံ့ပြန်ဝေဖန်သည်။
လက်ရှိ သြစတြေးလျအစိုးရသည် ညွန့်ပေါင်းအစိုးရဖြစ်သည်။ ဂျွိုက်စ်၏ ကျေးလက်ဒေသ အခြေပြုအမျိုးသားပါတီနှင့် တန်ဘူးလ်၏ လစ်ဘရယ်ပါတီတို့ ပေါင်းစည်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဂျွိုက်စ်နှင့် တန်ဘူးလ်တို့ မသင့် မြတ်မှုကြောင့် အစိုးရအဖွဲ့အတွင်း ကြီးမားသော အကွဲအပြဲပေါ် ပေါက်လာစေနိုင်သည်။ အထက်လွှတ်တော်သည် ဒုဝန်ကြီးချုပ်ဂျွိုက်စ်နုတ်ထွက် ပေးရေးအဆိုကို လက်ခံဆွေးနွေး ရန် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅ရက်က ဆုံး ဖြတ်ခဲ့သည်။
မြန်မာပြည်သူများ အားလုံး တန်းတူညီမျှသော အခွင့်အရေးများ ရရှိနေသည်ကို တရုတ်ရိုးရာ နှစ်သစ်??
အိန္ဒိယ မီးရထားဌာန ဝန်ထမ်းအသစ် ကိုးသောင်းနီးပါး ခေါ်ယူခန့်အပ်မည်
မင်းသမီး ဖရန့်စစ် မက်ဒေါ်မန်၏ အော်စကာရုပ်တု အခိုးခံရ
မြန်မာ-ထိုင်းနယ်စပ် သောင်ရင်းမြစ်အတွင်း အမှိုက်များ ပစ်ချနေမှုကို ထိုင်းဘက်မှ ကန့်ကွက်နေသေ??
ပုဂံ-ညောင်ဦးတွင် ဧရာဝတီမြစ် အလှနှင့် ညနေရှုခင်းကို ဆင်စီး ကြည့်ရှုနိုင်ရန် ပလင်း ကမ်းသာယာ ဆင
နိုင်ငံသား မဟုတ်သူများအား မောင်တောတောင်ပိုင်းတွင် ပြန်လည်နေရာ ချထားခြင်း မပြုရေး ရခိုင်ြ??
လှိုင်သာယာနှင့် ရွှေပြည်သာမှ အထည်ချုပ် အလုပ်သမများ တရုတ် မယားအဖြစ် ရောင်းစားခံရမှု များပြား